Xeraddii General Gordan oo ay Dowladda la Wareegtay
Dowladda ayaa sidoo kale sheegtay inay la wareegtay maamulka iyo mushaaraadka ciidamaddii uu imaaraadka gacanta ku hayay ee xeradaasi ku sugnaa.
La wareegista xeradan ayaa ku soo beegmeysa xilli khilaafka u dhaxeeya dowladda Federalka ah ee Soomaaliya iyo Imaaraadka uu meel xun marayo, dhawaanna imaaraadku uu sheegay inuu joojiyay barnaamijkii tababarka ciidamada ee ay Soomaaliya ka wadeen.
Sidoo kale waxa ay ku soo beegmeysaa iyaddoo dowladda Qadar oo ay Imaaraadka is-hayaan ay safiir cusub u soo magawday Soomaaliya, kaasoo maanta warqadihiisa aqoonsiga uu ka gudoomay Madaxweynaha Somaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo.
Warbixin ku saaban kalkan ka dhageyso:
Somalia oo la Wareegtay Xeraddii Tababarka ee Imaaraadka
Dhinaca kale, Madaxweynaha Maamul Goboleedka Puntland, Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa maanta u ambabaxay dalka Imaaraadka Carabta, isagoo oo sheegay inuu kala soo hadlayo, tababarkii Imaaraadku uu ka waday Puntland.
Hadalka Gaas halka hoose ee qoraalkan ka dhageyso:
DHageyso Gaas oo u Amba baxay Imaaraadka Carabta